ओमिक्रोन भेरियन्टद्वारा संक्रमित हुँदा कस्ता लक्षण देखिन्छन् ? - Nagarik Today
होम » ओमिक्रोन भेरियन्टद्वारा संक्रमित हुँदा कस्ता लक्षण देखिन्छन् ?
दक्षिण अफ्रिकामा देखिएको कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनलाई चिन्ताको कारण मानिँदैछ । प्रारम्भिक प्रमाणमा यसको म्युटेशन निकै तीब्र गतिमा भइरहेको र पुनर्संक्रमणको खतरा पनि अत्यधिक भएको पाइएको छ । यो महिनाको सुरुवातमा दक्षिण अफ्रिकामा यो भेरियन्टबारे पत्ता लागेको थियो । अघिल्लो बुधबार विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) लाई यसबारे जानकारी दिइएको थियो ।
omicron virusomicron virus symptoms